Covering costs associated with childbirth
Daboolida Qiimaha La Xiriira Dhalmada
Sida qoysaska da’da yar ay horeyba u ogaayeen, kharashyada la xiriira dhalashada cunuggu dhaqso ayey isugu dari karaan. Nasiib wanaagse, waxaa jira qalab iyo barnaamijyo la heli karo oo ka caawiya qoysaska inay helaan waqti ay ku daryeelaan dhallaankooda iyo sidoo kale inay daboolaan qaar ka mid ah kharashyada ka hor iyo isla marka ay dhashaanba.
Dalka Mareykanka, haddii shaqsi u shaqeeyo shirkad ay ka shaqeeyaan 50 ama in ka badan oo shaqaale ah, Xeerka Fasaxa Qoyska iyo Caafimaadka (FMLA) wuxuu u baahan yahay shaqo-bixiyuhu inuu u oggolaado hooyooyinka 12 toddobaad oo fasax ah oo lacag la’aan ah sannad kasta dhalashada ama korsashada ilmaha. Markan fasaxu waa mid cajiib ah, laakiin ka warran helitaanka lacag inta lagu jiro wakhtigan?
Waxaa jira dhowr dariiqo oo lagu helo dakhli inta badan ama dhammaan waqtiga uu shaqsigu maqnaado 12kan toddobaad. Tusaale ahaan, fasaxa lacag-bixinta (PTO) uma baahna in loo isticmaalo fasaxyada oo keliya. In kasta oo ay muhiim tahay in laga hubiyo shaqaaleeye shaqsi si loo hubiyo in siyaasadaha la fahmay, wixii PTO ah ee la keydiyay waxaa loo isticmaali karaa hooyonimada ama fasaxa aabbanimada. Maalmo shaqsiyeed ama jirro sidoo kale waa la isticmaali karaa. Naafanimada muddada-gaaban ayaa sidoo kale la isticmaali karaa illaa 6 toddobaad ka dib dhalashada inta u dhexeysa 50-100% dakhliga caadiga ah, ka dib muddo cayiman oo cayiman. Marka dhammaan faa’iidooyinka la isticmaalo, waalidku wuu ka maqnaan karaa shaqada sida loogu baahan yahay, illaa 12 toddobaad ee ay dejisay FMLA.
Maine, shaqo bixiyayaal badan ayaa caymis siiya shaqaalaha oo daboolaya kharashyada caafimaad ee la xiriira dhalmada. Haddii kale, MaineCare waxay siisaa caymis caafimaad bilaash ama qiimo jaban kuwa buuxiya shuruudaha qaarkood. Medicare, Medicaid, Barnaamijka Caymiska Caafimaadka Carruurta, iyo caymiska loo maro Suuqa ayaa sidoo kale ka caawin kara qoyska inuu helo.
Iyada oo dhammaan barnaamijyadan iyo qalabkan la heli karo, had iyo jeer waxaa jiri doona xoogaa kharashyo caafimaad oo jeebka ka baxsan. Tani waa sababta waalidku ugu baahan yahay inay lacagtooda u keydsadaan inta karaankooda ah. Noocyada xisaabaadka qaarkood, sida Xisaabaadka Is bedbeddelaya (FSA) iyo Xisaabaadka keydka Caafimaadka (HSA), ma caawin karaan oo keliya waalidiinta inay kaydiyaan kharashaadka caafimaadka, laakiin sidoo kale waxay leeyihiin faa’iidooyin cashuur. FSA ahaan, lacagta loogu daro koontada waxaa laga goynayaa dakhliyada ka hor canshuuraha, iyadoo hoos loo dhigayo dakhliga canshuurta ee shaqsiyeed. Si kastaba ha noqotee, dhammaan lacagaha waa in la adeegsadaa dhammaadka sanadka ama waa la lumiyaa. HSA, lacagta way rogi kartaa sanadba sanadka ka dambeeya sidoo kale waxaa laga goynayaa dakhliga ka soo gala canshuurta ka hor. Si wax looga geysto HSA, shaqsiga waa in lagu qoraa qorshe caafimaad oo laga jari karo.
In kasta oo mararka qaarkood ay noqon karto mid qaali ah oo dhib badan, waalidiin badan waxay dhahaan in ubad yeelashadu ay tahay mid ka mid ah waaya-aragnimada ugu wanaagsan ee noloshooda. Barashada ku saabsan qalabka la heli karo waxay ka dhigi kartaa wax badan oo la maareyn karo
PreviousMiyaad ka fikireysaa inaad u wado Uber ama Lyft? Hubso inaad ka fekereyso caymiska!
NextSida carruurtaada loogala hadlo lacagta Lacagta aragtida soogalootiga
Wanaagsan – waxaad bilowday ganacsi. Hadda maxaa?
Ka -hortaga sonkorta, ogaanshaha, daaweynta.
Caymiska ganacsiyada yaryar